Ka Dib Ciyaar Xaraarad Laheyd: Chelsea Iyo Tottenham Oo Ku Hishiiyay Bar-bar Dhac Xilli Lampard Qasaariyeen Fursado - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Ka Dib Ciyaar Xaraarad Laheyd: Chelsea Iyo Tottenham Oo Ku Hishiiyay Bar-bar Dhac Xilli Lampard Qasaariyeen Fursado
November 29, 2020 at 20:30 Ka Dib Ciyaar Xaraarad Laheyd: Chelsea Iyo Tottenham Oo Ku Hishiiyay Bar-bar Dhac Xilli Lampard Qasaariyeen Fursado2020-11-29T20:30:19+02:00 CAYAARAHA
Kooxaha Chelsea iyo Tottenham ayaa isku mari waayay kulankii adkaa ee ku dhexmaray Stamford Bridge iyagoo ku heshiiyay barbaro goolal la’aan ah xilli labada kooxood ay ku soo shirtageen qaab ciyaareed uu taxadar weyn ka muuqday.
Natiijadaan ayaa farxad u ah Tottenham kuwaasoo ku soo laabtay hogaanka horyaalka Premier League iyadoo 21 dhibcood ku haya balse farqiga goolasha ka sareeya kooxda kaalinta labaad ee Liverpool halka Chelsea ay kaalinta 3aad ku jirto iyadoo leh 19 dhibcood.
Labada kooxood oo qaab ciyaareed fiican ku jiray isbuucyadii ugu danbeeyay ayaa soo bandhigay qaab ciyaareed ay labada kooxoodba taxadar weyn muujinayeen iyadoo mid walba ay mida kale ka sugeysay inay sameyso qaladka ugu horeeya si ay ugu ciqaabaan.
Qeybtii hore Blues ayaa kubada gadaal ka soo dhiseysay halka Tottenham ay ahaayeen kuwa mar walba sugaya kubad rogaal celis ah, kooxda Blues ayaa shabaqa soo taabatay laakiin VAR ayaa ka diiday goolka madaama uu offside ciriiri ah uu jiray iyadoo lagu kala nastay barbaro goolal la’aan ah.
Chelsea ayaa ciyaarta furfurtay qeybtii labaad iyadoo Tottenham ay yareysay cadaadiskii ay saarayeen Blues qeybtii hore ee ciyaarta.
Daqiiqadii 63aad ayay Chelesea u dhawaatay inay shabaqa soo taabato markii uu Timo Werner uu kubad ka soo shaqeeyay laakiin waxaa ka faa’ideysan waayay Tammy Abraham.
Daqiiqadii 82aad Mason Mount ayaa isna markiisa isku dayay inuu Chelsea hogaanka u dhiibo isagoo kubad uu dhexda ka soo jiiday gool la beegtay laakiin waxaa si fantastik ah u badbaadiyay goolhaye Hugo Lloris.
Tababare Lampard ayaa 10kii daqiiqo ee ugu danbeysay ciyaarta soo geliyay Olivier Giroud iyadoo Chelsea ay weerar joogta ah ku heysay goolka Tottenham.
Hugo Lloris iyo daafacyada Tottenham ayaana u babac dhigayay weerarada isdaba jooga ah ee ka imaanayay Chelsea.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro goolal la’aan ah oo ay labada kooxood isku mari waayeen.
« Shaxda Rasmiga Ah Ee Arsenal vs Wolves: Mikel Arteta Oo Shax Adag Ku Soo Galay.
Dowladda Soomaaliya oo cayrisay Safiirka Kenya dibna ugu yeertay Safiirka Soomaaliya »